काठमाडौं । निर्मला हत्याबारे जवाफ दिन संसदमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले बम दिदीबहिनीबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाउदै गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नु भयो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
गगन थापाको प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिदै यो गम्भीर प्रश्न भएको बताए । आफूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न नगरेको बरु छानविनलाई छिटो निश्कर्षमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएको उनले बताए । साथै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे थाहा नभएको बताए ।
गृहमन्त्री थापालाई सांसदहरुले राज्यभन्दा पनि शक्तिशाली को हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
गृहमन्त्री बादलले भने यसबारे सही उत्तर आफूले भन्दा वीरेन्द्र केसीले नै दिनसक्ने बताएका थिए । छानबिन समितिका सदस्य केसीले आफूहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार भन्दै गृहमन्त्रीले भने, ‘घटनास्थल, जहाँ उहाँले छानविन गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे । त्यसक्रममा एक जना शक्तिशाली देखिने ठूलै जिउडालको मान्छे आयो रे । उसले तपाईले राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ । तर, यस्ता छानविन धेरै भए । छानविन गर्नेहरुलाई गाडी लगाएर हत्या हुने गरेको सम्झनुहोला भनेर भनेर ।’ थापा अघि भन्छन्, ‘शायद शक्तिशाली व्यक्ति त्यही हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि थाहा छैन नाम ।’
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एकनाथले मागे संसदमा प्रतिनिधित्व
काठमाडौं । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकालले संसदमा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर निर्वाचन अघिको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन
गुठीलाई सामान्तवाद भन्नु 'आगोमा घिउ थप्नु' जस्तै हो - राजेन्द्र लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले गुठीलाई परम्परा सामान्तवाद भन्नु 'आगोमा घिउ थप्नु' जस्तै भएको बताए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद लिङ्देनले गुठीमाथिको हस्तक्षेप गुठीयारमाथि मात्रै नभई सनातन
गुठी विधेयकको बहस प्रदेस ३ को संसदमा पनि, फिर्ता लिन माग
हेटौँडा । सङ्घीय सरकारद्वारा दर्ता गरिएको गुठी विधेयकले काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य प्रदेशमा धार्मिक दङ्गा भड्किन नदिन सरकारले सो विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रदेश नं ३ प्रदेशसभा बैठकको विषेश